असारे विकासको बेथिति | चितवन पोष्ट
असारे विकासको बेथिति
Rural roads being constructed haphazardly with the use of bulldozers in Bahrabisa VDC, Bajura, on Thursday, July 28, 2016. Photo: THT
अहिले देशभर असारे विकासको चटारो देखिएको छ । चालू आव ०७५/७६ सकिन अब एक सातामात्रै बाँकी छ । तर, असारे भेलसँगै विकास बजेट सक्न धमाधम पुँजीगत खर्च गर्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । विगतका वर्षमा झैँ अहिले पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतारमा विकास खर्च बढाउने पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ । अहिले असारे विकासमा दैनिक औसत ३ अर्ब रूपैयाँका दरले पुँजीगत खर्च भइरहेको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले असार मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशत खर्च नबढाउन निर्देशन दिए पनि असारे विकास मौलाउँदा पुँजीगत बजेट खर्चको दर अप्रत्याशितरुपमा बढेको अर्थविद्हरुले औँल्याएका छन् । सरकारी निकायलाई विकास बजेट सक्न चटारो परेको छ । यही असारभित्र विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभए त्यसै ‘फ्रिज’ हुने समस्या छ । बजेट ‘फ्रिज’ नै हुने अवस्था आएपछि विकास गरेको देखाउन धान रोपेको खेतमाथि नै डोजर चलाइएका खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । यो कस्तो विकासको लहर हो ? बर्खाको भेलमा पैसा बगाएर गरिएको विकास खर्चको प्रतिफल कस्तो होला ? गम्भीर सवाल उत्पन्न भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असारे विकासमा १ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भइसकेको छ । केन्द्र सरकारले चालू आव ०७५/७६ का लागि पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण)तर्फ कुल ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवको एक साताभित्र अझै डेढ खर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट विनियोजन गरेको ११ महिनासम्म कछुवा गतिमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । चैतसम्म ३५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले असारे विकासको मौका छोपेर ५६ प्रतिशत पँुजीगत खर्च पु¥याइसकेको छ । असारे विकासका लागि दुई वर्षदेखि अलपत्र परियोजनामा समेत बजेट निकासा गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिक खर्च निरूत्साहित गर्न जेठ महिनामै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि त्यसको परिणाम भने सकारात्मक देखिएको छैन । विकासका योजना प्रभावकारी भएर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको भए पक्कै पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउने थियो । तर, अहिले बजेट सक्ने चटारोले अनियमितता गर्नेहरुलाई नै बल मिलेको छ ।
असारे विकासको चटारो हेर्दा मुलुकमा बजेट कार्यान्वयनको फितलो अवस्थालाई चित्रण गर्छ । विकासको गति सुस्त गतिमा भइरहेको दृष्टान्त पनि असारे विकासको प्रवृत्तिले पुष्टि गर्छ । विगत दस महिनामा हुन नसकेकोभन्दा बढी पुँजीगत खर्च असारे विकासका नाममा एक महिनामै हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कुशासनको चक्रमा धकेल्दै लगेको आभाष हुन्छ । हतारमा बजेट निकासा गर्ने र काम देखाउन धान खेतमै डोजर चलाउने प्रवृत्ति मुुलुकको हितमा छैन । केही ठेकेदार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मोटाउनेबाहेक अन्य उपलब्धि मुलुकले हासिल गर्दैन । विकास निर्माणका नाममा रकम सक्ने प्रवृत्तिविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आवको अन्तिममा आएर विकास निर्माणका काम र बजेट निकासा गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्बौं रूपैयाँ निकासा हुँदा ठूला–ठूला अनियमिततासमेत हुने गरेका छन् । अहिले ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीको साठगाँठका कारण त्यस्ता अनियमितता बाहिर आउन सकिरहेका छैनन् । राज्यकोषमा लुट भने मच्चिँदै आएको छ । सरकारी क्षेत्रमा दण्डहीनता मौलाउँदा असारे विकासको प्रवृत्ति संस्कारका रुपमा हुर्कंदै गएको हो । सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै सम्बन्धित निकायको आगामी बजेट कटौती गरिदिने नीति अख्तियार गरिनुपर्छ । हतारमा रकम छर्नुभन्दा ‘फ्रिज’ हुन दिनु नै उत्तम हो । सरकारले अब असारे विकासको प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा निरूत्साहित गर्नु जरूरी छ ।